IssueHunt: chikuva chitsva cheakavhurika sosi yemari | Kubva kuLinux
Mazuva mashoma apfuura muchinyorwa chandakaburitsa pano pablog, Ini ndakataura pane chakanakisa chikumbiro nokuti avo vanotsvaga nzira yeku kukwanisa kuita mari yako yakavhurika sosi mapurojekiti nerubatsiro rwe storj.
Storj inogadziriswa yakazara yekuchengetera mhinduro uye yakavhurwa sosi iyo inopa bhizinesi modhi yakafanana neAirbnb yevashandisi vane yekuwedzera yekuchengetedza uye bandwidth.
Iwe unogona kutarisa zvimwe zvemashoko eichi chinyorwa Mune inotevera chinongedzo.
Nhasi Ini ndichaunza imwe yakanaka nzira iyo iwe yaunogona kushandisa kuitira kuti iwe ugone kuwana mari kubva kune yakavhurwa sosi mapurojekiti ayo mazhinji ako anokudziridza.
Tichataura zvishoma nezve IssueHunt inova itsva chikuva iri kusimudzirwa sechirevo chakanakisa kuitira kuti vagadziri vanobva pasirese pasirese vawane mabhenefiti ezvavanowana.
Rimwe rematambudziko mazhinji evanogadzira uye akavhurwa sosi makambani anotarisana nawo ndeyemari.
Pane fungidziro, kunyangwe kutarisira, pakati penharaunda kuti Mahara uye Akavhurwa Sosi Software inofanira kupihwa pasina muripo.
Kunyangwe nkana zvakadaro mafomu mazhinji anoparadzirwa mahara, asi dambudziko imubhadharo wekuchengetedza izvi zvikumbiro uyezve ivo vanogadzira havadyi pane yakapusa yekutenda.
Ndokusaka kumwe kunyorera (kuri kushoma muLinux) kunowanzo sanganisira kushambadza kuitira kuti uwane imwe mari kana kupa kumisikidzwa kweimwezve yekushandisa.
Imwe nzira yekuita mari aya mapurojekiti ndeyekusanganisira kushambadza pawebhusaiti yavo kana kukumbira mupiro kuchikonzero.
1 Nezve IssueHunt
2 Iwe unopa sei iyo mibairo?
Kunyangwe, kune ino kesi, ivo vanogona kushandisa IssueHunt iyo inopa sevhisi iyo inobhadhara vakazvimirira vanogadzira kuti vabatsire kuvhura sosi kodhi.
Chigadzirwa chakauya apo vanogadzira kuseri kweBoostnot-kutora-kutora app vakasvika kunharaunda kuti vape zvipo kune yavo chigadzirwa.
Mumakore maviri ekutanga ekushandisa IssueHunt, Boostnot yakagamuchira dzinopfuura nyeredzi mazana masere nemazana mana kubva kuGithub kuburikidza nemazana evanopa uye zvipo zvakanyanya.
Chigadzirwa chakabudirira zvekuti timu yakafunga kuivhura kune vamwe vemunharaunda.
Nhasi, rondedzero yemapurojekiti inoshandisa sevhisi iyi, ichipa zviuru zvemadhora mubairo pakati pavo.
Iwe unopa sei iyo mibairo?
Zvinodaro kuburikidza nezvinonzi mibairo: mibairo yemari inopihwa kune chero munhu anogadzirisa rimwe dambudziko.
Mari yemubairo iyi inouya kubva kune chero munhu anoda kupa kuti chero chinhu chiwedzerwe kana bug yakagadziriswa.
Kana paine dambudziko neakavhurika sosi software vanogona kupa mubairo huwandu hwesarudzo yavo kune vanogadzirisa.
Kana iwe uri programmer iwe unogona kutarisa zvikumbiro zvakavhurika uye kugadzirisa dambudziko, kune izvi iwe unongoda kuendesa chikumbiro chekudhonza mune yeGitHub repository uye kana chako chekudhonza chikumbiro chakabatanidzwa uchawana mari.
Boostnot inoratidzira madhora mazana maviri nemazana masere ezviuru mubairo yakazara, nepo maSynconization eZvirongwa, aimbozivikanwa seVisual Studio Code Masystem Sync, anopa anodarika $ 2,800 mumubairo
Kune mamwe masevhisi iyo inopa chimwe chinhu chakafanana neicho IssueHunt qpamwe inonyanya kuzivikanwa ndeye Bountysource , iyo inopa mubayiro webasa rakafanana neInsueHunt, uku ichipawo nzira yekunyorera yekubhadhara yakafanana neLibrepay.
Ichi chirevo chakanakisa kune vese vanogadzira uye mapurogiramu vachitsvaga nzira yekuwana imwe mari yekuwedzera.
Zvakare, kuzvitarisa neimwe nzira, kune vanhu vazhinji vanowanzo gadzira maapplication avo eiyo nyore merit yekugovana nevamwe uye ini ndawana mukati memakore apfuura akawanda akanaka kwazvo uye anovimbisa kunyorera izvo zvinongomira kuenderera nekuvandudza nekuda kwekuti mugadziri haana nguva nekuti anotarisisa hupenyu hwake nebasa.
Nezvo iwe unogona kusiya mumaoko evamwe vane hunhu uye iyo nguva iyo inogona kubatsira kuchengetedza yako kunyorera.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kubva kuLinux » Noticias » IssueHunt: chikuva chitsva chemari yakavhurwa sosi yemari
AMD yakaburitsa iyo AMDGPU mutyairi nerutsigiro rwe X.Org 18.1